hirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu Shir-Guddoominayay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa looga hadlay arrimaha kala ah amniga dalka, – Puntland Voice
July 5, 2018 6:05 pm Views: 20
S shilalka gaadiidka iyo khasaaraha ka dhasha iyo warbixino kale.
Golaha Xukuumada Dawladda Puntland oo si xeel dheer uga faalooday amniga dalka ayaa sheegay in guud ahaan dalku nabad yahay, isla markaana waxay golahu cadeeyeen inay fashil ku danbaynayaan cadowga ka soo horjeeda nabada iyo xasiloonida shacabka Puntland.
Golaha oo ku dheeraaday Amniga dalka ayaa faray shacabka Puntland dal iyo dibadba inay garab siiyaan ciidamada geesiyaasha ah oo u taagan goor kasta xoreynta xuduudaha dastuuriga ah iyo ilaalinta xoriyada shacabka Puntland.
Shilalka gaadiidka iyo Khasaaraha Kadhasha.
Golaha xukuumada Dowladda Puntland oo warbixin ka dhagaystay Wasaaradda Howlaha Guud iyo Gaadiidka ayaa ka dooday xakameynta shilalka, bad qabka dadweynaha iyo hirgalinta shuruucda isu-socodka dalka, waxuuna Madaxweynahu magacaabay guddi heer wasiira ah oo soo baara isla markaana kasoo tala bixiya dhibaatada ka dhalata shilalka gaadiidka iyo khasaaraha kadhasha.
Ugu danbeyn Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland ayaa warbixin ka dhagaystay guddiga dabagalka iyo ilaalinta gaadiidka Dowladda (GD) iyo guddiga baarista iyo ka hortaga tahriibta oo meel fiican marinaya wax ka qabashada hayaanka dhalanteedka ah ee soo galaya xuduudaha Puntland